Ikhaya IZITOLO ZE-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali bebhola lase-Italy I-Giorgio Chiellini Ingane Yendaba Yengane Plus Untold Biography Facts
I-LB inikeza iNdaba Ephelele Yebhola le-Football eliyaziwa kakhulu ngesiteketiso "King Kong". Indaba yethu ye-Giorgio Chiellini Yobuntwana kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sokubantwana kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela indaba yakhe yokuphila ngaphambi kokudumisa, isizinda somndeni, ukuphila komshado, kanye nezinye izinto eziningi ezingekho (okungaziwa) ngaye.
Yebo, wonke umuntu uyazi ngamakhono akhe avikelayo kodwa abambalwa babheka i-Bio yethu ye-Giorgio Chiellini eyinto enhle kakhulu. Manje ngaphandle kokuqhubeka kwe-ado, ake siqale.
Giorgio Chiellini Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts-Ukuphila Kwangaphambili Nomkhaya
UGiorgio Chiellini wazalwa ngo-14th ka-Agasti 1984 ePisa, e-Italy. Wazalelwa kunina, u-Lucia Chiellini (umphathi webhizinisi) noyise, uFabio Chiellini (isifuba samathambo ngesikhathi sokuzalwa kukaChiellini).
Nakuba uCiellini wazalelwa esifundazweni sase-Italy, wahlala nomndeni wakhe esifundeni esiseduze saseLiborno, okuyi-25.1 amakhilomitha aphuma ePisa futhi eyaziwayo ngokukhanga kwabavakashi.
Ukuzalwa kwabazali abasebenza ngemisebenzi ephezulu ekhokhelwa futhi efuna ukuhlakanipha, u-Young Chiellini wayenenkululeko yokuzikhethela ukuqhuba noma yikuphi ukukhetha kwakhe kanye nokwenza iqhaza kunoma yiliphi i-sport he fancies.
Ukuze kufezeke lokho, u-Chiellini waqala uhambo lwakhe lokuba yintombazane yebhola ngendlela engavumelani nayo eyenza ukuqina kwakhe kwebhola lezinyawo kuvele njengendlela yokuthola ukunambitheka. Ukukhethwa kwezemidlalo kweChiellini kwakunguBucketball, umdlalo ayedlala phakathi neminyaka yakhe yokufundisa futhi wahlangana kahle ngamabanga aphezulu esikoleni.
Kodwa-ke, ukubamba iqhaza kukaChielini ku-Basketball kwakungakapheli njengoba engacatshangwa kakhulu ngokwanele ukuze azame imidlalo yokuncintisana, intuthuko eyamvusa ukuba avusa umdlalo webhola lezinyawo kuye ngokubhalisa ku-Livorno 9 FC lapho eneminyaka eyisithupha ubudala. Ngenkathi ekhona, wagcina amathebhu ngezenzo zezwe lebhola basketball futhi usalokhu engumlingisi Kobe Bryant futhi LA Lakers.
Giorgio Chiellini Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts-Umsebenzi we-Buildup
UChiellini wenza iminyaka engu-10 yokuphila kwakhe edlala amaqembu asebasha eLiborno FC ngaphambi kokuthola ukukhuthazwa eqenjini lokuqala leqembu ku-2001. Ukuhlala kwakhe eklabhu wambona ekhombisa amakhono okuzivikela okuphezulu okwenziwa yiMphathi kaLiborno ngaleso sikhathi akakwazanga ukuvuma ukuthi wayeke wachaza iChiellini ngendlela elandelayo;
UGiorgio uyinhlangano yemvelo, umdlali wendawo yonke ukuthi yonke imenenja ithande eqenjini labo. Uvela kwenye iplanethi futhi angabika abadlali abathathu ngesikhathi.
Ukuzama ukuhamba kwezemidlalo kulandela ukuthi uChiellini unomlingani wamaRom, asayinwe yiJuventus futhi wathengiswa ngokusebenzisana noFiorentina. Le nkathi yabuye yabona iChiellini iphakamisa izinga lokufunda njengoba ephothula esikoleni esiphakeme ukuphishekela i-Economics ngokukhethekile kwi-Business administration.
Giorgio Chiellini Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts-Ukuphakama Ekudumeni
U-Juventus uvikele ngokugcwele amasevisi we-Chiellini ku-2005 futhi wamenza waba umdlali ovamile eqenjini lokuqala leqembu. Ukudutshulwa kwakhe kokuqala kudumile ukusiza iqembu ukuthi liwine i-29th scudetto, isihloko esasikhumbuza kamuva I-2006 "Calciopoli" inhlamba.
Noma kunjalo, u-Chiellini wasebenza neqembu lakhe ezinkathini ezalandela ukuze azibeke njengomunye wabavikeli abakhulu kakhulu futhi ahloniphe iziqu eziningana phakathi kwazo okwakuyi-2011 / 2012 Scudetto kanye nokuthuthuka ekupheleni kwe-Euro 2012. Bonke abanye, njengoba bekusho, ngumlando.
Giorgio Chiellini Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts-Ukuphila Ubudlelwano
UChiellini uphila ngenjabulo nentombi yakhe noma wagaduka umkakhe, uCarolina Bonistalli.
Imibhangqwana ebuhlotsheni babo obusukela ezinsukwini zabo ezisencane ibikezele ukubandakanyeka kwabo ngoMeyi 2014 ngaphambi kokushintshanisa isifungo ngesikhathi semikhosi yangasese yamaKatolika, ngoMgqibelo nge-17th kaJulayi 2014 eSanctuary yeMontenero eLiborno.
Inyunyana yabo ibusiswe ngendodakazi, uNine ozelwe ngoJulayi 2015. Akunakuphika ukuthi uyayithanda indodakazi yakhe njengoba ebhala lokhu ngaye kwiwebhusayithi yakhe:
"Nginothando olusha ngaphezu kwebhola ... Nina ... Ngiyibaba ojabula kakhulu emhlabeni"
Giorgio Chiellini Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts-I-Biting Scandal
Isigameko esiyingozi esabangela ukuthukuthela emhlabeni webhola lebhola kwakuyihlazo elihlabayo phakathi Luis Suarez kanye ne-Chiellini. USuarez, obonakale enesisindo sokuzivikela kanzima e-Chiellini, wakha amazinyo akhe ehlombe likaChiellini ngaphandle kokubanjwa noma ebhaliswe ngumdlali weqembu lokugcina phakathi kweBrazil no-Uraguay kwi-2014 World Cup eBrazil.
Ukuphendula ngokufutheka ekupheleni komdlalo uChilleni wagcizelela ukuthi;
'U-Suarez uyadlala futhi uhamba naye ngoba uFifa ufuna izinkanyezi zakhe zidlale eNdebe yoMhlaba. 'Ngingathanda ukubona ukuthi banesibindi sokusebenzisa ubufakazi bevidiyo ngokumelene naye. Umshushisi naye wabona uphawu lokuluma, kodwa akazange enze lutho ngalokhu. '
Ngesinye isikhathi, uSuarez wazama ukwehlisa isenzo sakhe sokuhlambalaza ngokucindezela lokhu:
'Lezi yizinto ezenzeke kulo mdlalo, sobabili besendaweni, wangiphakamisa. Lezi zinto zenzeka ngesikhathi, futhi akudingeki sibanike kakhulu (ukubaluleka). '
Kodwa-ke, uSuarez watholakala enecala futhi wanikezwa izinyanga ezine zokuvinjelwa ezifuywayo kanye nokumiswa kwamanye amazwe angu-9. Ngemva kwesikhashana, wacela ukuxolisa hhayi nje kuphela yiChiellini kodwa wonke umhlaba webhola.
Giorgio Chiellini Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts-Amandla Okuzivikela Nge-Brute
Nakuba kuyiqiniso ukuthi u-Chiellini wayeyisisulu esimweni sokushaya isikhalazo phakathi kwakhe no-Suarez, akusikho into ephikisayo yokuthi uChiellini usebenzisa amacebo amabi ukuze asebenze ngokuphumelelayo emkhakheni wokudlala. Okuphawulekayo phakathi kwamaqhinga anjalo kwakuyisigameko esimbonile engenhloso (njengoba esho) Miralem Pjanic ngesikhathi umdlalo phakathi kukaJuventus noRom ngoMeyi 2014.
Ukuphawula ngalesi sigameko u-Chiellini wagcizelela ukuthi akazange abe ne-elbow I-Pjanic ngenhloso yokwengeza ukuthi uye wacela ukuxolisa kumuntu owaziwayo.
Angizange ngizame ukumgcoba, njengoba nje ngangizama ukumvimbela ekuphumeni odongeni, ngendlela efanayo oyenzayo ebhokisini. Ngaxolisa ku-Pjanic koxhumana nabo, kodwa azikho izinkinga phakathi kwethu. Emidlalweni enjengale nginikezwe abantu abambalwa bese ngithola abambalwa kakhulu.
Kodwa-ke, uChiellini wathola ukuvinjelwa kweSerie A emithathu ngoba lesi sigameko ngemuva kokubukwa kwe-TV esetshenziselwa ukuhlola ukuxhumana kukaChiellini nomphakathi weRom. U-Chiellini uhlaselwa futhi uhlaselwa ngamakhono akhe okuzivikela okuhlukumezayo okumbonile ukuthi ephukile ekhaleni lakhe izikhathi ezine futhi ufisa ukuba izingane zakhe zizuze ikhefu lomfazi wakhe ngokumelene nekhala lakhe elibi.
"Ngithemba ukuthi izingane zami zithatha ikhala likaCaroline,"
Giorgio Chiellini Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts-Isizathu Esiphezulu Sesidlaliso
U-Chiellini wayebizwa ngokuthi "King Kong"Ngabalandeli nabasekeli ekuqapheliseni amandla, umzimba kanye nokuhlukunyezwa ukuthi unomvikeli kanye nesitayela sakhe sokugubha okubandakanya ukushaya isifuba sakhe.
Giorgio Chiellini Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts-Akuyona nje ibhola
U-Chiellini ungomunye wabadlali abanobuchwepheshe abanobuchwepheshe abafinyelele ezitelekeni nakuba behlanganyela ngokugcwele emdlalweni webhola. NgoJulayi 2010, wagcwalisa i-Laurea ie bachelor degree ezikoleni zezohwebo nakwezohwebo eNyuvesi yaseTurin futhi ngo-Ephreli 2017, wathola i-Laurea Magistrale ukuthi i-master degree ekuphathweni kwebhizinisi kusuka esikhungweni esifanayo. Ngempela ungumuntu obalulekile okumele akhiphe abadlali bebhola.
Giorgio Chiellini Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts-Twin Brother and Agent
U-Chiellini unomfowenu ofanayo owaziwa ngokuthi uClaudio. Laba bafana ababili bekhulile njengabantwana abathandana neClaudio abasekela uJuventus ngesikhathi uChiellini ethanda i-AC Milan. Noma kunjalo, amawele avumelanise uthando lwabo lwebhola njengoba uClaudio osebenza njenge-agent ka-Chiellini esebenza ukuqinisekisa ukuthi umfowabo ujabule kuJuventus.
Giorgio Chiellini Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts-Imininingwane yomuntu
I-Chiellini inezici zobuntu ezingenamandla amakhulu, amandla nokuzethemba. Ubuye abe namakhono obuholi obukhulu ngoba lokhu kubonakala lapho ephakamisa isikhundla sakhe sokuba isikhundla sika-Juventus sika-Vice-Captain isikhundla sakhe kanye nezinkulumo zakhe zokukhulumisana ensimini. Konke lokhu kumenza abe mnandi kubalingani bakhe futhi amenze abe ngumuntu othandwayo phakathi kwabalandeli.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda indaba yethu yeGiorgio Chiellini Childhood kanye namaqiniso angabonakali e-biography. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma ubona okuthile okungabonakali kahle kulesi sihloko, sicela ubeke amazwana wakho noma uxhumane nathi !.